menstrual cycle – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ အပျိုဖော်ဝင်ပြီးစ မိန်းကလေးတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် လစဉ်ရာသီစက်ဝန်း ကမောက်ကမ ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား ဆရာ။ ဖြေ ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရာသီစက်ဝန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် အပျိုဖော်ဝင်စမိန်းကလေးတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတယ်၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေများတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့က...
အပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်တို့သိသင့်သည့် ရာသီလာခြင်းဖြစ်စဉ် . . .
ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မိန်းကလေးတစ်ယောက် အပျိုဖော်ဝင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးဖြစ်လာတယ်။ ပထမဆုံး Hypothala-mus ဟိုက်ပိုသားလမတ်စ်လို့ ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်အ စိတ်အပိုင်းလေးက GnRH ဟော်မုန်းတွေ စထွက် လာတယ်။ အဲဒီ Gonadotropin Releasing Hormone...
မေး. ဘာကြောင့် ရာသီသွေးဆင်းများရပါသလဲ။ သွေးဆင်းများတာက အန္တရာယ်ရှိပါသလား။ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ ဟော်မုန်းတွေမမှန်လို့ သွေးဆင်းများတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ စိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့ ၀မ်းနည်းတာကြောင့်လည်း သွေးဆင်းများတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ရောဂါတွေကြောင့်လည်း သွေးဆင်းများတတ်ပါတယ်။ သားအိမ်ထဲမှာ အလုံးဖြစ်နေရင်၊...
ရာသီစက်ဝန်းဆိုသည်မှာ . . .
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မေး. ရာသီလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါတွေထဲမှာ သားအိမ်ဆိုတဲ့ အလုံးလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီအလုံးလေးက ကြည့်လိုက်ရင် သေးသေးလေးဆိုပေမယ့် အံ့သြစရာကောင်းတာက ကလေးတစ်ယောက် သူ့ထဲမှာ ကြီးထွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သားသားမီးမီးလေးတွေနေတဲ့ အိမ်အဖြစ် သားအိမ်လို့...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး ။ သမီးရဲ့ သူငယ်ချင်း model show ပွဲရှိလို့ ရာသီလာတာ တစ်ရက်လောက်ရပ်ချင်ရင်ရလား ဆရာ။ အသက်က ၂၀ ပါဆရာ။ ရာသီလာမယ့်ရက်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့မှာ ပွဲရှိလို့ပါဆရာ။ ဖြေ ။ မိန်းကလေးတိုင်း အပျိုစဖြစ်ကတည်းက သွေးမဆုံးခင်အထိ...
ရာသီလာခြင်း အရိုးစွဲအယူအဆများ (Myths about menstrual cycle)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁။ ကျွန်မ ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်။ ဓမ္မတာ ပုံမှန်တော့ လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းနေလို့ပါ။ နှစ်ရက်လောက်နဲ့ နည်းနေလို့ပါ။ အလွန်ဆုံး သုံးရက်ပဲလာပါတယ်ရှင့်။ ဒါပုံမှန်ပဲလားဆိုတာ သိချင်လို့ပါရှင့်။ ရာသီ နည်းရင် ဘာများ ဖြစ်တတ်ပါသလဲရှင့်။ နောက်ပြီး ဓမ္မတာအတွင်း ခေါင်းလျှော်လို့ကောရပါသလား...